कोरियामा हुनुहुन्छ? पायल्सको समस्या छ? यसो गर्नुहोस ! – Kantipur Press
कोरियामा हुनुहुन्छ? पायल्सको समस्या छ? यसो गर्नुहोस !
मलद्वारमा रहेको भेरिकोज नलीमा दवाव परेमा पायल्स हुने गर्छ । भेरिकोेज नलीमा दवाव परेमा उक्त नली चर्कने, फुट्ने वा त्यसमा चिरा पर्ने गर्छ ।
यसले मलद्वारमा पीडाा हुनुका साथै मल त्याग गर्नमा कठिनाई हुने गर्छ । सामान्य व्यक्तिमा पाइल्सले खासै गम्भीर समस्या निम्त्याउदैन । तर, रगत पातलो गर्ने औषधिको सेवन गर्नेहरुमा पायल्सले लिभर सिरोसिसको समस्या निम्त्याउँछ ।
सावधानीपायल्स हुने मुख्य कारण भनेको कब्जियतको समस्या हो । कब्जियत भएमा मल त्याग गर्न बलको आवश्यकता पर्छ । यसरी बल लगाउँदा मलद्वारा वरिपरिको नशा फुटेर पायल्सको समस्या निम्तने गर्छ ।